Wasiirka Maaliyada ee Ciraaq oo ka badbaaday weerar bambaano • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Wasiirka Maaliyada ee Ciraaq oo ka badbaaday weerar bambaano
Wasiirka Maaliyada ee Ciraaq oo ka badbaaday weerar bambaano
Wasiirka Maaliyada ee dowlada Ciraaq oo kamid ah hogaamiyaasha Sunnida dalkaasi Ciraaq ayaa shalay (Axad) ka badbaaday weerar bambaano oo lala beegsaday kolonyo gaadiid ah oo uu la socday.
Wasiirka Maaliyada Dr.Rafa al-Issawi ayaa kamid ah siyaasiyiinta Sunnida oo todobaadyadii lasoo dhaafay hogaaminayey mudaharaadyada looga soo horjeedo Raysalwasaaraha Xukuumada u badan shiicada ee Nuuri Maliki.
Kolonyo uu la socday wasiirka ayaa bambaano wadada loogu aasay ku qaraxday mar ay marayeen wadada u dhaxeysa magaalooyinka Fallujah iyo Abu Qurayb oo galbeedka uga beegan magaalada caasimada ah ee Baqdaad.
Wasiirka wax dhaawac ah masoo gaarin balse waxaa dhaawacyo soo gaareen qaar kamid ah illaaladiisa.
Dr.Rafa al-Issawi oo kamid ah Xukuumada Midnimo Qaran ee uu Hogaamiyo Raysalwasaaraha Nuuri Maliki ayaa dhawaan ugu baaqay Raysalwasaarahiisa inuu xukunka isaga dego, wuxuuna Wasiirka Maaliyada qeyb weyn ku leeyahay mudaharaadyada muddada labada todobaad ah ka socda magaalooyinka ay u badan yihiin dadka sunnida ah ee Fallujah, Ramada iyo Samara.
Dowlada Ciraaq ayaa dhawaan xirtay 7 kamid ah Illaalada khaaska ah ee Wasiirka Maaliyada, waxayna xukuumada ku eedaysay illaaladiisa danbiyo la xariira argagaxiso.
Shacabka Sunnida ah ee ku dhaqan dalka Ciraaq ayaa ka cabanaya xukuumada u badan shiicada ee uu hogaamiyo Raysalwasaare Nuuri Maliki inay cunsuriyeeyaan ama caburiyaan dadka Sunnida ah.
Raysalwasaaraha Ciraaq ayaa dhawaan amaray in xabsiga laga siidaayo 700 haween maxaabiis ah, arrintaasi oo kamid ah qodobadii ay horey u codsanayeen dadka Sunnida ah ee mudaharaadka ka wada dalkaasi Ciraaq.
Wasiirka Maaliyada Rafa Al Essawi ayaa hogaaminaya isbaheysiga lagu magacaabo Ciraaqiya, waxaana lagu wadaa in isbaheysigiisa kamid noqdo xisbiyada sida weyn ugu loolama doorashooyinka Gobalada ee dalkaasi ka dhici doona 3 bilood kadib, waxaana sidoo kale doorashada Madaxtinimada ee dalkaasi dhici doontaa sanadka soo socda.